रोबलोक्समा नि: शुल्क रोबक्स (२०२०) कसरी पाउने? - गेमि।
जब यो अनलाइन खेलहरू खेल्न आउँदछ, रोबक्स प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईं दुबै गेमर र विकासकर्ताहरू भेट्टाउनुहुनेछ। रोब्लक्स एक प्रसिद्ध अनलाइन गेमि platform प्लेटफर्म हो जुन यसमा प्राय: लोकप्रिय खेलहरू होस्ट गरिएको छ। गेमरहरू यससँग जोडिएको छ, र कुनै प्रकारको खेल खेल्दा तिनीहरूलाई केवल एउटा चीज चाहिन्छ, र त्यो हो रोबक्स। रोबक्स एक इन-गेम मुद्रा हो जुन गेमरहरू विभिन्न कपडाहरू, हतियार, अवतारहरू, इत्यादि किन्नको लागि प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईंसँग रोबक्सको सही मात्रा छ भने, तपाईं यस गेमिंग प्लेटफर्ममा एक धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ, र तपाईं कुनै पनि खेल्न सक्नुहुन्छ कुनै सीमितता बिना खेल। अब प्रत्येक प्रश्नमा आउने मुख्य प्रश्न भनेको नि: शुल्क रोबक्स कसरी पाउने भन्ने हो।
कुनै पनि अन्य जस्तै, इन-गेम मुद्रा, तपाईंले रोबक्स पनि प्राप्त गर्न वास्तविक पैसा तिर्नु पर्छ। खेल पास हुँदै, प्रोमो कोडहरू निःशुल्क रोबक्स पाउने तरीका थियो, तर त्यो अब सही रूपमा काम गर्दैन। यस लेखमा, हामीले केहि राम्रा तरिकाहरू सूचीबद्ध गर्नुभयो रन्स टक्स रोबक्स। यदि तपाइँ खेलहरू सिर्जना गर्न वा उनीहरू मार्केटि good गर्न पनि राम्रो हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई रोबक्सको सभ्य रकम बनाउन मद्दत गर्दछ।
अमेजन प्राइम छात्र छूट पाउनुहोस्
फ्रि रोबक्स पाउने उत्तम तरिकाहरू:
व्यक्तिहरू जहिले पनि विश्वास गर्छन् कि रोबक्स नि: शुल्क लिनु एकदम गाह्रो छ, र यो सम्भव छैन। तर यो पूर्ण रूपमा सत्य हुँदैन, हामी स्वीकार गर्दछौं कि यसलाई कडा परिश्रम र स्मार्ट कामको संयोजनको आवश्यक पर्दछ। यहाँ हामीले केहि कानूनी विधिहरू उल्लेख गर्यौं जुन तपाईंले रोबक्सलाई निःशुल्क सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र यसको लागि व्यावहारिक प्रयास बाहेक केही आवश्यक पर्दैन।
१. रोबलोक्स एफिलिएट प्रोग्राम प्रयोग गर्नुहोस्
रोबलोक्सको एउटा उत्तम चीज भनेको यो पैसा कमाउन चाहनेहरूको लागि एक आश्चर्यजनक सम्बद्ध कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। तपाईं सम्बद्ध प्रोग्राम प्रयोग गरेर बनाउनु भएको प्रत्येक नयाँ साइन अपको लागि नि: शुल्क रोबक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि व्यक्ति जसलाई तपाईंले संदर्भित गर्नुभयो कुनै आईटमहरू, त्यसपछि त्यस्ता कार्यहरूको लागि तपाईंलाई पनि पुरस्कृत हुनेछ। सहबद्ध कार्यक्रमहरू मार्फत सही प्रकारको इन-खेल वस्तुहरू साझेदारी गर्न रोबक्सको विशाल रकम कमाउनको लागि उत्तम तरिका हो।
तपाईंले रोब्लक्स स्टोरबाट एक चयनित वस्तु छान्नुपर्नेछ, र तपाईंले त्यहाँ साझेदारी बटन विकल्प पाउनुहुनेछ। केवल यसमा क्लिक गर्नुहोस् र रेफरल URL पाउनुहोस्, जुन कोड पनि समावेश गर्दछ। अब यसलाई विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वा वैध विधिमा प्रमोट गर्न प्रचार गर्नुहोस्। यदि तपाईं रोब्लक्समा नयाँ गेमरहरूको सही मात्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईंलाई धेरै उत्कृष्ट चीजहरूको साथ पुरस्कृत गरिनेछ।
यद्दपि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं मात्र URL लाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्दै हुनुहुन्न किनकि यसले कुनै पनि प्रकारको इन-गेम मुद्रा उत्पन्न गर्दैन। तपाईंले एक सम्बद्ध कार्यक्रमको लागि साइन अप गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईं प्रचार गर्न चाहानुभएको साइट चयन गर्नुहोस्।
२. रोबक्स कमाउनको लागि खेल सिर्जना गर्दै
जब तपाईं उत्तम कार्यहरू गर्न तयार हुनुहुन्छ, रोब्लक्स प्लेटफर्म हो जुन प्रत्येक विकासकर्ताले प्रयोग गर्नुपर्दछ। यहाँ तपाइँ एक ठोस खेल को विकास गर्न टेक प्रतिभा हुन जरूरी छैन किनकि अनलाइन गेमिंग प्लेटफर्मले तपाईलाई मद्दत गर्न पहिले नै धेरै आवश्यक औजारहरू प्रदान गर्दछ।
तपाईको आफ्नै खेल बनाउनु अझै पनि उत्तम र सबै भन्दा इनामदायी तरीका हो नि: शुल्क लुक्स। ड्रपबक्समा होस्ट गरिएका धेरै खेलहरू आधारभूत कौशल सेटको साथ डिजाइन गरिएको हो, र तपाईं ट्यूटोरियल भिडियोहरू हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। एक पटक तपाइँले खेल सिर्जना गर्नुभयो भने, यसको लागि अर्को स्तरमा हिट हुनका लागि मात्र प्रतिक्षा गर्नुहोस्, र प्रत्येक व्यक्तिले रोब्लक्सको लागि साइन अप गर्दा, तपाईं सभ्य पैसा कमाउनुहुनेछ।
Re. तपाइँको खेल प्रमोट गर्न रेफरल प्रोग्राम प्रयोग गर्दै
एकचोटि तपाइँ तपाइँको खेल पूर्ण विकसित गर्नुहुन्छ, माथिको उल्लिखित एफिलिएट प्रोग्राम प्रयोग गर्ने सोच्न को लागी तपाइँको खेल प्रमोट गर्नुहोस्। यहाँ तपाइँ प्रत्येक नयाँ साइन अप र खेल आईटमहरूको खरीदको लागि रोबक्स कमाउनुहुनेछ। तथापि, यसले तपाईंलाई केही वास्तविक कडा परिश्रम गर्नु पर्छ। यद्यपि यो तपाइँले लिने प्रत्येक कार्यको लागि लायक हुनेछ।
तपाइँको खेल बिभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूको माध्यमबाट Sare गर्नुहोस् र तपाइँको खेलको लागि ठोस फ्यानबेस सिर्जना गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ जुनबाट तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ जुन खेलको कुन अंशहरू सुधार आवश्यक छ।
कपडाहरू सिर्जना गर्दै र तिनीहरूलाई मार्केटप्लेसमा बेच्दै:
यदि तपाईं कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन फेशन मनपर्दछ र रचनात्मक दिमाग छ भने, यो तपाईंको लागि रोबक्स कमाउन उत्तम हुन सक्छ। रोबलोक्सको बजार छ जहाँ तपाईं अनुकूलन उपकरणको प्रयोग गरी कपडा सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई तपाईंको इच्छित मूल्यमा बेच्न सक्नुहुनेछ। गेमरहरू तिनीहरूको चरित्रका लागि बिभिन्न अवतारहरू प्रयोग गर्न मन पराउँछन्, र रोब्लक्समा टी-शर्ट, प्यान्ट र अन्य कपडाहरूको लागि ठूलो माग छ। यदि तपाईंसँग सृजनात्मकताको उचित मात्रा छ भने, यो धेरै माग गरिएको कपडा सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुहोस् र पैसाको एक सभ्य पैसा कमाउनुहोस्।
तपाईं आधिकारिक वेबसाइटमा अवतारहरूका लागि बिभिन्न कपडाहरू कसरी सिर्जना गर्ने सिक्न सक्नुहुन्छ र केही पाठहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
रोब्लक्स प्रीमियममा सम्मिलित हुँदै:
जहाँसम्म हामीले रोबक्स कमाउनका लागि फ्रीवे साझा गर्ने छौं भनेर भने पनि, एक रोबक्स प्रिमियम पाउने अझै पनि रोबक्स प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हो। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, रोबलोक्स प्रीमियम सदस्यता-आधारित छ, जसले तपाईंलाई बजार पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ तपाईं सस्तो मूल्यमा सिर्जना गर्न, बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ, वा रोबक्स। एक रोबलोक्स प्रीमियम योजना प्राप्त गर्न धेरै मा उपयोगी छ किनकि यहाँ, तपाईं बजारबाट बनाएको हरेक रोबक्स खरीद मा १०% को मासिक रोबक्स छुट छ।
के रोबक्स जेनरेटरले काम गर्दछ?
धेरै छायावादी वेबसाइटहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई निःशुल्क रोबक्स जेनेरेटरहरूमा पहुँच दिएर उनीहरूलाई घोटाला गर्दछन्। शुरुआती दिनमा रोबक्स जेनरेटरहरूले काम गरेका थिए जब मोडरेटरहरूले यस्ता चीजहरूलाई त्यति महत्त्व दिएन। तर, अब प्लेटफर्मले मापदण्डहरू बढाएको छ, र तपाईं कहिले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न प्रोमो कोड यी छायादार वेबसाइटहरू द्वारा उत्पन्न Robux नि: शुल्क प्राप्त गर्न।
त्यसो भए यी केहि उत्तम तरिकाहरू छन् जसमार्फत तपाईले निःशुल्क रबक्स कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईंले केहि पनि भुक्तान गर्नु पर्दैन र धेरै छिटो रोबक्स उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिको नि: शुल्क पास, प्रोमो कोडहरू आदि साझा गर्ने बारे शंका छ, तर तिनीहरू अब काम गर्दैनन्। ती दिनहरू थिए जब तपाई रोबक्स सित्तै प्रोमो कोडहरू प्रयोग गरेर पाउनुहुन्थ्यो। जे होस्, यदि तपाईं कानुनी तरीकाबाट कमाउन चाहानुहुन्छ भने, माथि उल्लेखित विधिहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग श doubts्का वा प्रश्नहरू छन् भने तल टिप्पणी तल दिनुहोस्।
रोबलोक्स नि: शुल्क डाउनलोड (२०२०)
कसरी Spotify विद्यार्थी छुट छ?
तपाईंले प्रयास गर्नु पर्ने उत्तम एन्ड्रोइड संगीत प्लेयर अनुप्रयोगहरू (२०२०)
शीर्ष दस चलचित्र स्ट्रिमि sites साइटहरू २०१ 2016
अनलाइन होम सिनेमा हेर्नुहोस्
कुन टिभी बक्स सब भन्दा राम्रो हो
तपाईं कसरी विद्यार्थीहरूको लागि प्रीमियम प्रीमेट प्राप्त गर्नुहुन्छ
खेल आतंकवादी शहर मा समस्या जस्तै
अनलाइन नि: शुल्क पूर्ण फिल्महरू हेर्नुहोस् अनलाइन साइनअप वा डाउनलोड गर्नुहोस्
हराउने सफ्टवेयर नि: शुल्क डाउनलोड पूर्ण संस्करण पीसी